HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER 3-DEC-2019
Tuesday December 03, 2019 - 10:10:06 in Wararka by Mogadishu Times
Xasan Sheekh Oo Kulan Xasaasi Ah La Qaatay Wakiilka QM Ee Soomaaliya Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka UPD Xasan Sheekh Maxamuud iyo wakiilka Q/Mi doobe u qaabil san arrimaha Soo maaliya
Xasan Sheekh Oo Kulan Xasaasi Ah La Qaatay Wakiilka QM Ee Soomaaliya Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga Midowga Nabadda & Horumarka UPD Xasan Sheekh Maxamuud iyo wakiilka Q/Mi doobe u qaabil san arrimaha Soo maaliya James Swan ayaa maan ta kulan ku yee shay M/Muqdi sho. Md.Xasan Sh.iyo Jemes Swan ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay siyaasadda iyo amniga dalka Soomaaliya iyo arrimo kale. Sidoo kale Madaxweynihii hore ee dalka iyo Wakiilka QM Jemes Swan ayaa Ra'yi is weydaarsi ka yeesheen arrimaha doorasho oyinka 2020, nidaamka Federaalka, ilaalinta dastuurka iyo amniga guud ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii 2da Mas'uul ayaa isla meel dhigay dhammaan qodobadii ay ay mas'uul kawada hadleen, ayadoona guul uu kusoo dhamaaday kulanka.
G/Shacabka Oo Ansixiyay ku Noqosha da Miisaaniyadda Dowladda Ee 2019
Xildhibaannada Golaha Shacabka Baa rlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kul an ku yeeshay Xarunta Villa Hargeysa ee M/Muqdisho, iyadoo kulanka uu ku furmay 141 Mudane.
Kulanka ayaa waxaa Shir Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo labadiisa ku-xigeen, wax aana Ajendaha uu ahaa Akhrinta 3-aad ku Noqoshada Miisaaniyadda dowladda ee 2019-ka.
Sidoo kale Xildhibaanada ayaa intii uu socday kulanka waxaa ay Anxiyeen ku Noq oshada Miisaaniyadda 2019-ka, iyagoo u qaaday Cod gacan taag ah.
118 Xildhibaan ayaa Ogalaatay in la Ansixiyo ku Noqashada Miisaaniyada 2019-ka, 15 Mudane ayaa diiday, 8 Xildhibaan ay aa ka Aamustay, waxaana Guddoomiye Mur sal uu ku dhawaaqay in sidaas lagu ansix iyay ku Noqashada Miisaaniyadda.
Labo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa maanta magaala da Muqdisho kula kulmay Safiirka do wladda
Mareykan ka u fadhiya Soom aaliya Danjire Donald Yamamoto.
Musharaxiinta kala ah Cabdiraxmaan Xus een Odawaa oo ka tirsan xildhibaanada gola ha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo Kamaal Guutaale oo isna ka mid ah hog gaanka Xisbiga Wadajir ayaa Yamamoto kala hadlay sidii ay doorasho madaxbanaan oo loona dhan yahay ay uga dhici laheyd Galmudug.
Qoraal kooban oo lagu soo dabacay barta Twitter-ka safaaradda Mareykanka ee Muqdisho oo looga hadlay kulankaas ayaa lagu yiri, "Hey’ado dowladeed oo xoog leh waxay ka dhigan yihiin awood loola tacaali karo xasaradaha bani’aadannimo, ka guul eytayaasha argagixisada iyo soo abuuridda xasiloonida Soomaaliya, si loo gaaro bara are”.
Odawaa iyo Kamaal ayaan dhankooda weli wax war ah kasoo saarin kulanka maan ta ee ka dhacay xarunta safaaradda Marey kanka ee Muqdisho oo ay la qaateen safiirka Mareykanka Donald Yamamoto.
Shalay ayey aheyd markii uu safiirka Ma reykanka safaaradda ku qaabilay madaxwey nihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Ax med oo haatan ah guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran oo ay ku midoobeen dhow xisbi siyaasadeed oo dalka ka jira.
Booliska Somaliya Oo Digniin Soo Saar ay Iyo Saldhigyada Oo Heegan La Geliyay
War qoraal ah oo bar teeda Facebook ay kusoo qortay Taliye ku-xigeenka Ciidanka Booliska Zakiya Xus een Axmed ayaa wax aa ay ku sheegtay in dhamaan Saldhigyada Booliska ee Gobolka Banaadir iyo laanta Gurmadka Deg-deg ah la geliyay heegsan buuxa.
Sidoo kale Zakiya ayaa sheegtay in sha cabka ku dhaqan Caasimadda loo diyaariy ay gaadiidka Gurmadka Deg-deg ah iyo ku wa Dab demiska, iyadoo tilmaamtay in qof Kasta oo u baahda Gurmad in uu la xiriiro hay’addaha amniga dowladda.
"Iyadoo dhawaan la filaayo roobabka Ma hiigaanka waxaa dhamman saldhigyada bolii ska G/Banadir iyo Laanta Gurmadka Dag Dag ah ee Dowlada Hoose la geliyay hee gan buuxda sidoo kalena la diyaariyay baab uurta gargaarka sida ambulansyada iyo deb demiska. Hadaba muwaadinkii u baahda gur mad dag dag ha la xiriiro heyadaha amniga iyo gurmadka dag dag” ayay tiri Zakiya Xus een.
Taliye ku-xigeen Zakiya Ma sheegin hal ka ay ka soo xigatay xogta ku aadan Roob abka kusoo wajahan Magaalada Muqdisho.
Guddoomiye Cumar Finish Oo Magac aabay Guddoomiyeyaal Degmo
Wareegto kasoo baxsaday Xafiiska Gud doomiyaha Gobolka Ban aadir ahna Duqa Muqdis ho Cumar Maxamuud Ma xamed Finish ayaa wax aa Guddoomiye Cusub lo ogu Magacaabay Degma da Waaberi.
Cabdicasiis Cismaan Jaamac ayaa loo Mag acaabay inuu noqdo Guddoomiyaha Cusub ee Degmada Waaberi, kaasi oo Guddoomi yihii hore ee Degmadaas Allaha u naxariis tee Mahad Cilmi oo ku geeriyooday Qaraxii 24-kii July ee 2019 ka dhacay Xarunta Maa mulka Gobolka Banaadir.
Guddoomiye Cumar Finish ayaa Aweys Sheekh Maxamed Amiin u magacaabay Gud doomiyaha Cusub ee Degmada Shangaani ee Gobolka Banaadir, kaasi oo bedelaya Sahra Markeezi oo ku geeriyootay Qaraxii ka dhacay Gobolka Banaadir.
Sidoo kale Cumar Finish ayaa Axmed Maxamud Diiriye u magacaabay Guddoomi ye ku-xigeenka Arrimaha Bulshada degma da Wadajir ee Gobolka Banaadir.
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ee fariisinkooda yahay Degmada Baardh eere ee Gobolka Gedo ayaa wada howlgal ballaaran oo ay Al-Shabaab kaga saarayaan deegaanno dhaca Galbeedka Degmada Baa rdheere oo maalmahii la soo dhaafey ay soo buux dhaafiyeen Xubno ka tirsan Al-Shab aab.
Saraakiisha howlgalka hoggaamineysa ayaa waxaa ay sheegeen in cabasho uga ti mid dadka Shacabka ah ee ku nool tuu looyin hoostaga Baardheere gaar ahaan Tuulooyinka Reydab iyo daar Macallin oo ay sheegeen inay dhibaato kala kulmeen Urur ka Al-Shabaab.
Abaanduulaha Ururka 49aad Guutada 1-aad qeybta 43aad Xidigle Maxamed Weli Ca bdullaahi Xersi ayaa sheegay in deeganna da ay howlgalka ka fuliyeen ay 40km dhina ca Galbeed ka xigaan degmada Baardhee re,isla markaan ay dhibaatooyin ka wadaan Al-Shabaab kana qaadanayeen xoolahooda sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa uu sheegay in Ciidamada Dowlad da ay la wareegeen Saldhigyadii Al-Shaba ab ku lahaayeen deegaannada Reydab iyo daar Macallin,isla markaana ay guul ka gaar een dagaal ay la galeen.
Isaga oo sii hadlayay ayuu sheegay in Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ilaa iyo inta ay ka saarayaan de egaannnada ay kaga sugan yihiin tuulooyin ka hoostaga degmada Baardheere. Wali wax war ah kama soo bixin al-shabaab ay arrntaa ugu hadlayaan.
Soomaaliya iyo Suudaan oo yeelanaya Iskaashi Ganacsi
Danjiraha Safaarada Soomaaliya Dalka Sudan Danjire Maxamed Sheekh Isxaaq ay aa waxaa uu Xarunta Safaarada kulan kula qaatay Wasiirka Wasaaradda Warshaddaha iyo Ganacsiga Dalka Sudan. H.E Maddani Cabaas.
Kulanka oo ay ku wehliyeen howl wadee nno ka tirsan Xafiiska Wasiirka ayaa waxaa lo oga wada hadlay sidii dib loogu soo nooleeyn lahaa xiriir ganacsi iyo mid iskaashi ee dhex mara labada dal, kaas oo jiray inta uusan Soomaaliya burbur ka ka dhicin.
Sidoo kale kulankaa waxaa laysku soo hadal qaaday inay ganacstada Soomaaliy eed si gaar ah loogala macaamilo arrimaho oda ganacsi ay ku leeyihiin dalka sudan,sida uu sheegay Danjire Maxamed Sh. Isxaaq.
Waxaana dhawaan la rajeynayaa kulan Ganacsi inuu dhex maro labada Wasaarado od, iyo labada Rug Ganacsi iyo ganacsato la bada dhan kasoo loogu magac daray .(ISBUUCA GANACSIGA SOOMAALIYA).
DFS oo shaacisey waqtiga la dhameyna yo dhismaha waddada Muqdisho & Afgooye
Ra,iisul Wasaaraha XF/Soomaaliya Md. Xasan Cali kheyre ayaa sheegay in Wadda da u dhaxeysa Mu qdisho iyo Afgooye lagu soo gabagabe eyn doono muddo laba bil ah.
Ra,iisul wasaare Kheyre ayaa tilmaamay in Al-Shabaab ay isku dayday in ay joojiso dhismaha ka socda Waddada isku xirta Muq disho iyo Afgooye, isla markaana Ciidamada Qalabka sida ay fashiliyeen isku day weera rro ay ku soo qaaday Injineerada ku howlan dhismaha Waddada.
Wadadaan ayaa ah mid muhiim u ah isku socodka Gaadiidka iskaga kala goosha Mu qdisho iyo Gobollada dalka, waxeyna kordhi naysaa kobaca dhaqaalaha dalka, iyada oo ay inta badan isticmaalaan Gaadiidka Khuda arta ka keena Shabeellaha hoose.
Ciidanka Amniga Boosaaso Oo Gacan ta Ku Dhigay Hub Iyo Gaadiid
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Gobolka Bari ayaa Habeen Hore waxaa ay howlgalo ka sam eeyeen M/Boosaaso, iyagoona kusoo qab tay hub sharci darro ah oo lagu dhex watay gudaha Magaalada.
Howlgalkan ayaa waxaa uu sigaar ah u ga dhacay Xaafado ku yaalla Bartamaha Boosaaso, waxaana intii uu socday lagu soo qabtay hub sharci darro ah iyo dadkii watay, kuwaasi oo lagu xiray xabsiyada Boosaaso.
Sidoo kale howlgalka ayaa waxaa barbar socday fiiqista Muraayadaha madow ee ku xiran gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee Isticmaalayay Waddooyinka ku yaalla Boosa aso oo horey looga mamnuucay deegaana da Puntland. Taliyaha Qeybta Booliska Gob alka Bari G/S Xuseen Cali Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheeg ay in howlgalka laga saameeyay Boosaaso inta uu socday Ciidanka amniga ay gacanta ku soo dhigeen gaadiid ay Ciidamadan ku raadjoogeen, kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay la raadinayay.
G/S Xuseen Cali Maxamuud ayaa waxaa uu tilmaamay in kormeer ay ku tageen Sa ldhigyada Ciidamada Booliska ee ku yaalla Boosaaso, wuxuuna laamaha amniga Gobol ka Bari uu kula dardaarmay inay xoojiyan howlgalada lagu xaqiijinayo amniga.
Ciidamo Badan Oo Ka Tirsanaa Pun tland Oo Ku Biiray Somaliland
Wararka aan ka heleyno Degmada Taleex ee Gobolka Sool ayaa waxaa ay sheega yaan in halkaas saacadihii lasoo dhaafay lagu soo Bandhigay Ciidamo badan oo la sheegay inay ka soo goosteen Puntland, iyagoona ku biiray dhanka Somaliland.
Ciidamadan oo ku dhawaad gaarayay 150 Askari ah kana tirsanaa Maamulka Puntl and ayaa ku biiray Somaliland, kuwaasi oo lagu Munaasabad soo dhaweyn ah loogu sa meeyay Degmada Taleex ee Gobolka Sool.
Wasiirka Warfafinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo Munaasabadda lagu soo dhaweynayay Ciidanka ka hadlay ayaa waxaa uu sheegayaa in Somaliland ay ku soo biireen Ciidamo badan oo kasoo goos tay Puntland, kuwaasi oo ka howlgeli jiray deegaanka God-qaboob ee Gobolka Sool.
Sidoo kale Wasiir Koore ayaa waxaa uu tilmaamay in Ciidankan ay wataan gaadiidka nooca dagaalka, isla markaana wax kasto ay u baahan yihiin ay ka heli doonaan Xukuu madda Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Yuusuf Cali Koore ayaa isaga oo sii hadl aayay waxaa uu sheegay in Somaliland ays an duulaan ku ahayn Puntland, isla markaana ay ka shaqeyn doonin waxkasto oo sababi kara dhibaato ka dhex dhacda labada dhinac.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Puntland oo ay uga hadlayaan Cii damadan ay soo Bandhigtay Somaliland, ku waasi oo ay tilmaamtay inay kasoo goosteen Puntland, waxaana dhowr jeer oo horey jirtay in Ciidamo ka tirsanaa Puntland ay u wareegeen dhanka Somaliland.
Soomaaliland ayaa shalay Magaalada taleex ee gobolka Sool waxaa ay kusoo ban dhigtay 150 Ask ari oo ay sheegeen inay ka tir san aayeen Ciidama da Puntla nd oo dhankoo da ku soo biiray, hayee shee waxaa warkaasi beeniyey Maamulka Puntland.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta dow lad goboleedka Puntland Cali Axmed Sab r ey ayaa sheegay in aan waxba ka jirin warka kasoo baxay Soomaaliland,isla mark aana aysan jirin ciidamo ku biiray Soom aaliland.
Isaga oo la hadlayay mid kamid ah Warb aahinta ka howlgasha deegaannada Puntl and ayuu sheegay in Ciidamada ay Sooma aliland soo bandhigtay ay yihiin Maleeshiya ad loo geliyey dharka Ciidanka balse aysan aheyn Ciidamo. Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in So omaaliland xilligan deegaana deeda uu ka jiro jahwareer Siyaasadeed,isla markaana aysan awood u laheyn inay Ciidamo kala wareegaan Puntland.
Xukuumadda oo dib u howl gelisay Mac hadka Diblamaasiyadda Qaranka
Wasiirka Arrimaha dibadda iyo iskaa shiga caalamiga ah ee XFS Amb. Axmed Ciise Cawad, ayaa ma anta dib u furay ma chadka dibl amaasiyadda qar anka oo hoos taga wasaaradda arrimaha dibadda, dib-u-dhis ballaaranna loo gu sameeyay in lagu horumariyo dibla maas iyad da dal ka. Munaasab adda dib-u-furid da machadka oo lagu qabtay xarunta machadka ayaa wa xaa kasoo qayb galay wakiillo iyo safiirro ak soc da waddamada saaxiibka la ah Soomaa liya.
Wasiirka ayaa dowladda Qatar iyo sand uuqa horumarinta Qatar uga mahad celiyay taageeradooda mashaariicda horumarineed ee dalka iyo dib-u-dhiska Machadka qaran ka, waxaa kale oo wasiirku u mahad celiyay dowladaha Soomaaliya ka caawinaya tabab arka diblamasiyiinta lagu siinayo machadka.
Machadka diblamaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda oo la aasaasay December 3, 1986 ayaan shaqeyn wixii ka dambeeyay 1991 oo aheyd xilligii ay buburtay dowladdii dhexe ee dalka, waxaana dib u howl gelint iisu ay qayb ka tahay halbeegyada tubta siyaasadda loo dhanyahay iyo horumarinta diblamaasiyadda dalka.
Garyaqaan Suleymaan Maxamed Max amuud Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ay aa maanta xilka kala wareegay Dr.Axmed Cali Daahir Xeer ilaaliyihii hore, kaddib mun aasabad lagu qabtay Muqdisho.
Munaasabadda oo ay soo qaban qaabis ay Xafiiska xeer Ilaalinta Qaranka ayaa wax aa ka qeybgalay Guddoomiyaha Maxk amad da sare ee dalka, Wasiirka Cadaalad da, Taliye ku-xigeennada Boolis ka iyo Asl uubta iyo marti sharaf kale.
Xeer ilaaliyihii hore ee Qaranka Dr Axmed Cali Daahir oo xafladda hadal ka jeediyay ay aa sheegay in muddo lix sano ah uu ka shaq eynayay xafiiska, maantana uu ku faraxsan yahay in uu xilka ku wareejiyo Garyaqaan Suleymaan oo uu ku sifeeyay in uu yahay shaqsi aqoon u leh howshan.
"Laakiin waxa aan ugu faraxsanahay wa xa weeye xafiiska oo aan ku qanacsanahay meesha uu maanta taaganyahay iyo Qofka aan ku wareejinayo asagana aan ku qanac sanahay aqoontiisa, kartidiisa, aadaabtiisa, aqlaaqdiisa, Diintiisa inay is waafaqi karaa noo aan ka gam’i karo sidaas ayaan ugu far axsanahay” ayuu yiri Dr Axmed Cali Daahir .
Dr.Axmed Cali Daahir ayaa kula dar daa rmay howlwadeenada xafiiska xeer Ilaalinta Qaranka inay si hufan oo daacad ah ula sha qeeyaan mas’uulka cusub, isagoo xafis ka dalbaday dhamaan howlwadeenanada xeer ilaalinta.
Dr.Suleymaan Maxamed Maxamuud Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa ugu hor eyn loo dhaariyay xilka xafiiska, waxaana uu balan qaaday in qofkasta oo Soomaaliyeed uu ku qanci doono howsha xafiiska Xeer ila alinta Qaranka.
"Waxaan rajeynayaa inaan gaarno in qof ka Soomaaliga uu ku kalsoonaado shaqada loo qabanayo, daacadnimo iyo hufaan inay meeshan ka jirtana dadku ka marqaati kac aan, qofkii macaahiirtaa ka dhex baxa oo ku shaqeyn waaya, asna waxaan filaaya inuus an reerkeena ka mid ahaaneynin oo ka dhex bixi doona”.ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka.
Dr.Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa xusay in uu xoogga saari doono sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta howlwadeenada xeer ilaalinta Qaranka.
Sacudi Carabiya oo markii ugu horeys ay hoggamineysa dalalka ka tirsan G-20
Shirkii dhowaan lagu soo gabagabeeyay dalka Japan ee ay isugu yimaadeen madax da dalalka ka tirsan ururka G-20 ee dhaq aal aha ku horumaray ayaa waxaa xilkaasi mar kii ugu horeysay loo doortay inuu hogg aamiyo dalka Sacuudi Carabiya oo leh shida alka ugu ba dan wada ma da Khali ijka. Ra’iisal Wasaara ha dalka Japan Shinzo Ape oo hor ay u ahaa guddoo miy aha dalal ka G-20 ay aa xilka ku wareejiyay dhaxal sugaha da’da yar ee boqortooyada Sacuudiga Ahmed Bin Salman, halkaasi oo dhaxal sug aha loogu hambalyeeyay xilka cusub ee loo doortay.
Mohamed Bin Salman oo halkaasi ka jee dinayay khudbad uu uga hadla yay xilka ay u doorteen 20-ka dal ee ku hor umaray dhaqaa laha adduunka ayaa sheeg ay in dalkiisa uu martigelinayo kulanka sana dlaha ah ee madaxda ka tirsan isbaheysi gaasi bisha Feb raayo ee sanadka 2020-ka.
Amiirka Sacuudiga ayaa sheegay in kula nkaasi ay sidoo kale ka qeyb gelayaan mad ax, wufuud iyo diblomaasiyiin ka socda dalal ka caalamka intooda badan, taasi oo uu she egay inay qeyb ka tahay sidii la isku dhaaf san lahaa kheyraadka iyo waxsoosaarka dalalka adduunka.
Hoggaaminta ururka G-20 ee dalka Sac uudiga ayaa ku soo beegmeysa xilli xukuu madda dalkaasi lagu eedeynayo inay tacad iyo kala duwan ku heyso siyaasiyiinta iyo dhinacyada mucaaradka ku ah hab maa mulka Boqor Salman.
Tan iyo markii talada dalkaasi boqorku ku wareejiyay wiilkiisa Mohamed Bin Salmaan wuxuu sameeyay isbedello waaweyn oo soo jiitay indhaha dalalka caalamka, isagoona da lka Sacuudiga ka hirgeliyay sharciyo lagu qa fiifinayo xorriyadda shacabka dalkaasi sida haweenka oo uu u ogolaaday inay gawaari kaxeysan karaan iyo kuwo kale.
Xildhibanada Baarlamaanka Hirshabelle oo kulamadoda Kooram la’aan u furmi la’
Xildhibaanada Baarlamaanka Maamul Goboleedka Hirshabelle ayaa maalintii lab aad ee isku xigta waxa uu u baaqday kula nkooda kooram la’aan iyadoo intabadan xil dhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ka maqan yihiin magaalada Jowhar oo ah xaru nta maamul goboleedka Hirshabelle.
Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabelle oo muddo bilooyin ah aan wax kulan ah yee lan ayaa waxaa la furay kalfadhiga 7aad ee baarlamaanka Hirshabelle 30kii Oktoobar 2019,mana jiro illaa iyo hadda wax kulan ah oo uu Baarlamaanku yeeshay.Magaalada Jowh